We Fight We Win. -- " More than Media ": တိုင်းရင်းနွယ်ဖွား ဘာသာစကား
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာစကား အုပ်စုများ အခြေပြမြေပုံ
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု ဘယ်နှစ်မျိုးရှိလဲလို့ မေးလာခဲ့ရင် လက်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး က စာရင်းအရ (၁၃၅) မျိုး ရှိပါတယ်ခင်ဗျလို့ ဖြေရမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒါမဟုတ်ဘူး အစိုးရက သက်သက်ဝါဒဖြန့်တာ တမင် များအောင် လုပ်ထားတာလို့ ဆိုသလို၊ မဟုတ်သေးဘူး ဒီထဲမှာ မပါသေးတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေ ရှိသေးတယ်လို့ ပြောကြသူ တွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ မျိုးနွယ်စုတွေ ကွဲပြားပေမယ့် ဘာသာဗေဒအားဖြင့် ခွဲခြားကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အ ဓိကအုပ်စုကြီး (၃) ခုဖြစ်တဲ့ Sino-Tibetan, Austro-Asiatic နဲ့ Tai-Kadai ကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ တိဘက်-မြန်မာ၊ မွန်-ခမာနဲ့ ထိုင်း-တရုတ် အုပ်စု (၃) ခုကိုသာ တွေ့ရမှာပါ။
ပင်မမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ Sino-Tibetan အုပ်စုကြီးမှာ Chinese နဲ့ Tibeto-Burman ဆိုပြီး မျိုးနွယ်အုပ်စုကြီး (၂) ခု ထပ်ကွဲပါ တယ်။ Chinese အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ်စုပေါင်း (၁၄) ခု ရှိပြီး Tibeto-Burman အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ်စုပေါင်း (၄၃၅) ခု ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ Tibeto-Burman အုပ်စုဝင် တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ -
(၁) အခါ၊ (၂) သက၊် (၃) ဂျိန်းဖော၊ (၄) ထမံ၊ (၅) ကဒူး၊ (၆) တဆီနာဂ၊ (၇) ပအို့၊ (၈) ပိုးကရင်၊ (ဖလုံစဝေါ်)၊ (၉) ပိုး ကရင် (ဖလုံ)၊ (၁၀) ထရု၊ (၁၁) ပဒေါင်၊ (၁၂) ဘွဲကရင်၊ (၁၃) ဂေခို၊ (၁၄) ဂေဘား၊ (၁၅) ပရဲ၊ (၁၆) မနုမနော၊ (၁၇) ယင်းဘော်၊ (၁၈)
Sino-Tibetan အုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
ယင်းတလဲ၊ (၁၉) ကယား (အရှေ့)၊ (၂၀) ကယား (အနောက်)၊ (၂၁) မိုပွာကယား၊ (၂၂) စကော ကရင်၊ (၂၃) ဝဲဝေါ်၊ (၂၄) ဇယိမ်း၊ (၂၅) ဟားခါးချင်း၊ (၂၆) ငေါန်ချင်း၊ (၂၇) ဆင်ထန်ချင်း၊ (၂၈) တောရ်ချင်း၊ (၂၉) ဇို ထုံးချင်း၊ (၃၀) ဇိုင်ဖေချင်း၊ (၃၁) ဖလမ်းချင်း၊ (၃၂) စီရင်းချင်း၊ (၃၃) တီးတိန်ချင်း၊ (၃၄) ရန်ခိုလ်ချင်း၊ (၃၅) ပူရာမ်ချင်း၊ (၃၆) ရာလ်တဲချင်း၊ (၃၇) ရိုလ်တဲချင်း၊ (၃၈) ဇိုမီးချင်း၊ (၃၉) ခွာမီးချင်း၊ (၄၀) ခူမီးချင်း၊ (၄၁) အရှိုချင်း၊ (၄၂) ဘွာလ်ခေါ ချင်း၊ (၄၃) ချင်းဘုံ (ချင်းတွင်းချင်း)၊ (၄၄) ဒိုင်ချင်း၊ (၄၅) မြိုချင်း၊ (၄၆) မွင်းချင်း (မင်းတပ်ချင်း)၊ (၄၇) ငလ (မတုချင်း)၊ (၄၈) ဝဲလောင်ချင်း၊ (၄၉) လိုင်နောင်နာဂ၊ (၅၀) လောင်ဖုရိနာဂ၊ (၅၁) မချမ်းနာဂ၊ (၅၂) ပရနာဂ၊ (၅၃) ဖုန်၊ (၅၄) လရှိ (လချိတ်)၊ (၅၅) မရု (လော်ဂေါ်)၊ (၅၆) ဗမာ၊ (၅၇) ချောင်းသား၊ (၅၈) အင်းသား၊ (၅၉) ရခိုင်၊ (၆၀) တောင်ရိုး၊ (၆၁) ထားဝယ်၊ (၆၂) ရမ်းဗြဲ၊ (၆၃) ဆန်ဆု၊ (၆၄) ဖျင်၊ (၆၅) လော်ပန်၊ (၆၆) လော်ပိ၊ (၆၇) လာမာ၊ (၆၈) နော်ရာ၊ (၆၉) နူး၊ (၇၀) ရဝမ်၊ (၇၁) အနု၊ (၇၂) လွိုင်၊ (၇၃) ပလု၊ တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Austro-Asiatic အုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
ဒုတိယ ပင်မမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ Austro-Asiatic အုပ်စုကြီးမှာ Munda နဲ့ Mon-Khamar ဆိုပြီး မျိုးနွယ်အုပ်စုကြီး (၂) ခု ထပ် ကွဲပါတယ်။ Munda အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ်စုပေါင်း (၂၂) ခု ရှိပြီး Mon-Khmer အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ်စုပေါင်း (၁၄၇) ခု ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ Mon-Khmer အုပ်စုဝင် တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ …
(၁) မွန်၊ (၂) ဆမ်တောင်း၊ (၃) တိုင်းလွိုင်၊ (၄) ဝ၊ (၅) ဓနော၊ (၆) ရူချင်းပလောင်၊ (၇) ရူမိုင်ပလောင်၊ (၈) ရွှေပလောင် (တအန်း)၊ (၉) ယင်းနက်၊ (၁၀) ယင်းကျား၊ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
Tai-Kadai အုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
တတိယ ပင်မမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ Tai-Kadai အုပ်စုကြီးမှာ Hlai, Kadai နဲ့ Kam-Tai ဆိုပြီး မျိုးနွယ်အုပ်စုကြီး (၃) ခု ထပ်ကွဲပါ တယ်။ Hlai အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ်စုပေါင်း (၂) ခု ရှိပြီး Kadai အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ်စုပေါင်း (၁၄) ခုနဲ့ Kam-Tai အုပ်စုမှာ မျိုးနွယ် စုပေါင်း (၇၆) ခု ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ Kam-Tai အုပ်စုဝင် တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ …
(၁) ခမ်းတီးရှမ်း၊ (၂) ဂုံရှမ်း၊ (၃) ရှမ်း၊ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အထက်က စာရင်းမှာ မပါဘဲ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ကိုးကန့်ကတော့ ပထမအုပ်စုကြီးဖြစ်တဲ့ Sino-Tibetan အုပ်စုဝင် Chinese မျိုးနွယ် အုပ်စုမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အုပ်စု (၃) ခုလုံးမှာ မပါဘဲ လက်ရှိ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတာကတော့ မော် ကင်းခေါ် ဆလုံမျိုးနွယ်စု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလုံဟာ Astronesian ပင်မမျိုးနွယ်စုကြီးရဲ့ Malayo-Polynesian မျိုးနွယ်စုမှာ ပါပါတယ်။
Malayo-Polynesian အုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေဟာ မျိုးနွယ်စုအမည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ မျိုးနွယ်စု တခုမှာ အခြားနာမည်ကွဲ များလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အထက်ပါ မျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာ လက်ရှိ ဘာသာဗေဒ စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ISO 639-3 အရ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ မျိုးနွယ်စုနာမည်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကျန်ခဲ့ရင်လည်း ကျန်ခဲ့တဲ့ မျိုးနွယ်စုဟာ အထက်က အုပ်စုကြီး (၃) ခု အတွင်းမှာသာဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ISO Code ဆိုတာကတော့ လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မျိုးနွယ်စုပေါင်း ခြောက်ထောင် ကိုးရာကျော်ကို ဘာသာစကားအ လိုက် အက္ခရာသုံးလုံးနဲ့ စနစ်တကျ ခွဲခြားထားတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းဘာသာစကား အချို့ကို ဖော် ပြရမယ်ဆိုရင် ဗမာ (ISO 639-3 : mya)၊ ဟားခါးချင်း (ISO 639-3 : cnh)၊ ဂျိန်းဖော (ISO 639-3 : kac)၊ မွန် (ISO 639-3 : mnw)၊ ရခိုင် (ISO 639-3 : rki)၊ ရှမ်း (ISO 639-3 : shn) စသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အုပ်စုကြီး (၃) ခုမှာလည်းမပါ၊ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လည်း အသိအမှတ် မပြုပေမဲ့ ဘာသာစ ကားရဲ့ မူလရင်းမြစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံပါလို့ ဖော်ပြထားပြီး ISO အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို လိမ်လည်ရယူထားတဲ့ ဘာသာစ ကား တခုကိုလည်း ဆက်ပြီး ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ အမည်ခံယူထားတဲ့ စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီ ဖြစ်ပါတယ်။
Indo-Aryan အုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီဟာ အင်ဒို-ယူရိုပီယန် ပင်မအုပ်စုကြီးက ဆင်းသက်လာတဲ့ အင်ဒို-အာရီရန် အုပ်စုဝင် ဘင်္ဂလီ-အာ သံ မျိုးနွယ်စုဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီ-အာသံ မျိုးနွယ်စုမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ လူမျိုးစု (၁၈) ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက တော့ .. (၁) အာသံ၊ (၂) ဘင်္ဂလီ၊ (၃) ဘစ်ရ်ှနုပရီယာ၊ (၄) ချက္ကမ၊ (၅) စစ်တကောင်း၊ (၆) ဟာဂျောင်း၊ (၇) ဟာလ်ဘီ၊ (၈) ကရော့၊ (၉) ခါရိယာ၊ (၁၀) ကာမူကာ၊ (၁၁) လော့ဟိ၊ (၁၂) မာလ်ပဟာရိယာ၊ (၁၃) မီအာဂန်၊ (၁၄) နာဟရိ၊ (၁၅) ရာ့ဂ်ျဘန်ရှိ၊ (၁၆) ရန်ပုရိ၊ (၁၇) ဆေလ်ဟေတီ၊ (၁၈) တန်ချန်ရာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Bangali-Assamese အုပ်စု အခြေပြမြေပုံ
စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီရဲ့ မျိုးနွယ်စု ဆင်းသက်ပုံကို ပြရရင် – Indo-European_Indo-Iranian_Indo-Aryan_ Eastern zone_Bengali Assamese_Chittagonian ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီရဲ့ ISO Code ဟာ (ISO 639-3 : cit) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘင်္ဂလီ-အာသံ မျိုးနွယ်စုဟာ လူမျိုးစု တစ်စုထပ်တိုးပြီး (၁၉) ခု ဖြစ်သွားပါတော့ တယ်။ ဖြစ်ရပုံကတော့ ရှိရင်းစွဲ ဘင်္ဂလီစစ်တကောင်း လူမျိုးစုကနေ စစ်တကောင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး လူမျိုးစုနှစ်စုကို မွေး ထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ ISO 639-3 : cit ကိုပယ်ဖျက်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ ISO 639-3 : ctg နဲ့ ISO 639-3 : rhg ဆိုပြီး ဖန် တီးလိုက်ပါတော့တယ်။ ယခင် စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီရဲ့ မူရင်းဒေသဟာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဖြစ်ပေမဲ့ အခုတော့ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရ်ှဆိုပြီး နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အခြေအနေမှန်ကို သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ လူ့အခွင့် အရေး အယောင်ပြပြီး စနစ်တကျနဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ နယ်မြေကျူးကျော်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ လူ မျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး နိုင်ငံသားမှန်ရင် နားလည် သဘောပေါက်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
လက်ရှိ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စစ်တမ်းတွေအရ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီ အရေအ တွက်ကို (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဟု ပြထားပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် (Johnstone and Mandryk 2001) စစ်တမ်းအရ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသား အရေအတွက်ဟာ (၇၃၀,၀၀၀) ပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိပြည်နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုင်း ရင်းသားအချို့တောင် လူဦးရေ တသန်းမပြည့်တာ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသတွေမှာ လည်း မျိုးနွယ်စုဦးရေ တသန်းမရှိကြပါဘူး။ ဒီကိစ္စဟာ ပြတ်ပြတ်သားသား မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ရေရှည်မှာ ဒုက္ခရောက်ပါ လိမ့်မယ်။ ရိုဟင်ဂျာရဲ့ အကိုတော်ဖြစ်တဲ့ စစ်တကောင်းဘင်္ဂလီ မျိုးနွယ်စု ၁၃ သန်းဟာ တဘက်မှာ အဆင်သင့် စောင့် နေကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ကိုယ့်မျိုးနွယ်စုတွေကို ကိုယ်တွေမှ မထိန်းသိမ်း မကာကွယ်နိုင်ရင်တော့ ပျောက်ကွယ်ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ ပျောက်လည်း ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်မှာပါတဲ့ ထမံသီဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ ထမံဘာသာစကားပြော ထမံတိုင်းရင်း သား မျိုးနွယ်စုရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။ ဒီပြည်ထောင်စုအတွင်းက မျိုးနွယ်စုတစ်ခု ပျက်သုဉ်းသွားခြင်းဟာ ဒီပြည်ထောင်စုသား အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ လူဦး ရေ တထောင်အောက် မျိုးနွယ်စုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလျစ်လျူရှုမထားဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်စခန်းများ
နောက်တခုက ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားစစ်စစ် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အရေးပါ ကရင်နီလို့ခေါ်တဲ့ ကယားတိုင်းရင်းသား အုပ်စုထဲ က အရှေ့ကယားမျိုးနွယ်စုဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စစ်တမ်းတွေအရ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမှ (၂၆,၀၀၀) ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲက သူ့ဇာတိဒေသဖြစ်တဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာ နေထိုင်နိုင်တဲ့ ဦးရေဟာ (၈၀၀၀) ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ (၁၈,၀၀၀) ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ။ အဲဒီအထဲက (၁၅,၀၀၀) ဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နေထိုင်နေကြရတာပါ။ အခြားတိုင်းရင်းသား မျိုး နွယ်စုတွေလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ အများအပြား ရှိကြပါသေးတယ်။ ရင်နာဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ၂၀၁၄ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းမတိုင်မီ အကြိုစစ်တမ်းအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု စာရင်း ကို ကောက်ယူသင့်ပါတယ်။ ဒါကလည်း သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် လူတယောက် ရှစ်ကျပ်ပဲ သုံးမယ်ဆိုတော့ ပြောရတာ အားတော့သိပ်မရှိပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရဆိုသူကော အတိုက်အခံဆိုသူများပါ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများအ ရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ၊ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေခြုံ ပြည်ပမျိုးနွယ်စု အရေး ကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား တားဆီးကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Thant Ko Ko Maung (ဖေစ်ဘွခ်မှ ..)
(၁) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပင်မမျိုးနွယ်စုကြီးများ
(၂) ISO 639 Code Tables
(၃) Request for Change to ISO 639-3 : cit Language Code
(၄) Request for New Language Code Element in ISO 639-3 : ctg
(၅) Request for New Language Code Element in ISO 639-3 : rhg
(၆) Comments received for ISO 639-3 Change Request 2006-048
Thank you very much for giving us the great knowledge.
တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာလည်းလုပ်ကြံဇာတ်လမ်း တစ်ခုပါ ကိုးကန့် လိုပါဘဲ ကိုးကန့်ဆိုတာ တရုတ်နယ်ချဲ့စီမံကိန်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ခေါ်တောကုလား နယ်ချဲ့စီမံကိန်း
Thank you for contributing on the interesting article and information of our (Myanmar)Race. Every Intelligent person already knew that this so called Ro-hin-gers do not belong or nothing to do with Burma. They are justacliff hangers trying to stuff them self into Burma,which supported only by their own 786 people. As you mention in the article,acouple millions of them are awaiting for the melting point. SERIOUSLY, BEWARE THY NEIGHBORS, ESPECIALLY RO-HIN-GER KA-LARR.
24 May 2012 at 14:17
to anony mous 14:17
not every myanmar born 786 people are supporting to rohingyas. study first before commenting. and it's issue of immigration and immigrants. myanmar born 786 oppose any people from mainland (PYI GYI) to come myanmar illegally whether china india thai or bangla. regardless of their religion. OK??
Reply, for 00:06
we are glad to hear that some Myanmar born 786 people oppose to rohinjas.
You and your parents should appreciate and pay respect to Myanmar people, because we share and give places to u guys inside our own mother land.
29 May 2012 at 12:33